Nhau - Kuongorora kwekutakura clearance uye kutenderera kuchinjika
Kuongorora kwekutakura clearance uye kutenderera kuchinjika
Kuongorora Kwekutakura Kuchenesa Uye Rotational Kuchinja
Kuyerwa kwekudzora kwemuchadenga kwekutakura kwese hakusi nyore. Simba rekuyera rinokonzera kuti ferrule uye nemuviri unotenderera pachawo nekubatana kwayo kuve kwakaremara. Huwandu hwekushanduka chinhu hwakawanda-hwakawanda hunokanganisa kuyerwa kukanganisa. Izvo zvine chekuita nekuyera simba, iyo yekudyidzana nyika uye chinhu chinotenderera. Nzvimbo yacho ndeye zvese.
Iko kutakura kutenderera kushanduka inowanzo kuongororwa munzvimbo yakatwasuka. Kazhinji rin'i yemukati yakagadziriswa (kana rin'i yemukati inobatwa-ruoko), uye rin'i yekunze inotenderedzwa neruoko kuti uone kana paine kurira kusinganzwisisike uye kuvhara kana kubereka kutenderera.
Kazhinji, iyo nguva yekutakura kutenderera yakareba, kumira kunononoka, uye kushanduka kwakanaka. Pane kupokana, iyo nguva yekutenderera ipfupi, kumira kunongoerekana kwaitika, uye kushanduka hakuna kunaka. Nekuda kwemhando dzakasiyana uye saizi dzekutakura zvivakwa, panofanirwa kuve nezvinodiwa zvakasiyana zvekuchinja kwavo kutenderera. Semuyenzaniso, kuroora mutsetse TOUR bhora mabheyaringi, kuroora mutsara TOUR chakakanda bhora mabheyaringi, nekuda kwechidiki nzvimbo yekubatana pakati pekupumburu chinhu uye ferrule, aya mabheyaringi anenge akareruka kana achitenderera, nepo mbiri mutsara radial idenderedzwa mabhegi uye anotambanudzira roller mabhegi, nekuda kutenderera Iyo nzvimbo yekubatana iri pakati pemuviri uye mujaho wakakura, uye huremu hwemhete yekunze idiki. Kana kutenderera kuchinjika kuchiongororwa, kunyangwe mumwe mutoro ukawedzerwa, brittleness ichiri yakaderera pane iya yeiyo imwechete mutsara radial bhora rinotakura.
Kune akakura kwazvo mabheyaringi, kana iwo akatenderedzwa, hapafanire kuve nejamming, uye kurira kwekutenderera hakuwanzo kuongororwa. Kune tapered bore bearings, nzira dzinotevera dzinogona kushandiswa kuwedzera kutenderera kushanduka kwekutakura. Iyo chaiyo yekushanda iri seinotevera: Dhinda iyo tapered inobereka inotakura mune mandrel kusvikira imwe radial preload yaiswa. Pasi peichi preload, ferrule Kana ichipeta, izvo zvinhu zvinotenderera zvinofanirwa kutenderedzwa. Kana icho chinotenderera chakatsvedza pachinzvimbo chekutenderera, zvinoreva kuti iyo ferrule geometry ine zviremero zvakawandisa kana iyo yekuumburusa element saizi haina yunifomu, uye iko kutenderera kuchinjika kwekutakura kwakashatawo.